HomeDUNIDAYURUB38 UkraineHoteelka Martida loo yaqaan 'Metro hostel' wuxuu ka furmay degmada Podol ee Kiev
26 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 38 Ukraine, YURUB, DUNIDA, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, VIDEO 0
Metro hostel, hostel-kii ugu horreeyay ee Yukreeniyaan ee adeegsada gaari-tareenka dhulka hoostiisa mara, ayaa laga furay degmada Podol ee Kiev.
Waxay ku qalabeysan yihiin gawaarida, qol kasta waxaa lagu magacaabaa saldhig caan ah oo ka socda nidaamka tareenka adduunka. Derbiyada qolalka, macluumaad ayaa laga siiyay saldhigga.
Bishii Diseembar 2017 laba gaari-hore ayaa lagu iibsaday Mihael Galparin oo leh qandaraaska 546 oo ah kun UAH. Markii hore, Galparin, oo aan wax fikrad ah ka qabin waxa ku saabsan doonnidahan, ayaa maskaxda ku soo dhacay 6 bilo kadib.
Gawaarida dagaalka ee loo rogay qolalka 8, dadka 4 ayaa lagu dejin karaa qol kasta. Qiimaha joogitaanka habeenka ayaa loo sheegay 400 UAH. (Xusuus-qorka Ukrhaber: Booqashadu waxay u muuqataa sida 450 UAH ama 105 TL.)
(Source: Ukrhab waa)
Dhamaystirka waddada Alsancak, Izmir 06 / 06 / 2016 Degmadda Alsancak ee Izmir, waddadan ayaa la dhammeeyey. Gaadiidka wadada waxaa hadda bixiya laba sheriffs. Ra'iisul Wasaare Binali Yildirim, Wasiirka Gaadiidka, Gaadiidka iyo Isgaarsiinta, Izmir, Alsancak ayaa cidhiidhi geliyay wadada sababtoo ah ciriiriga xayiraadda gaadiidka ee sannadihii ka dambeeyay markii la saxiixay qandaraaskii, Agaasimaha Guud ee TCDD iyo Iskuxirka Magaalada Izmir. Kooxaha Metropolitan Municipality waxay bilaabeen inay si degdeg ah u shaqeeyaan, TCDD ay burburisay derbiga beerta. Qiyaasta mitirka 1 ayaa dib loo ...
Isbitaallada cusub ee Izmir ayaa bilaabay adeegga (Sawir Sawir) 18 / 11 / 2016 İzmirin tareenada dhulka hoostiisa cusub galay adeegga: 240 95 million pounds raxan ka mid ah baabuurta mara darsato in la maal ah Izmir degmada Metropolitan, ayaa bilaabay markii ugu xiga 5 vagonluk set tareenka ugu horeysay oo qalab cusub. Shaqaalaha maraakiibta ayaa soo dhaweeyay rakaabkii ugu horreeyay ee tareenka cusub ee ubaxa. Dadka reer Izmir, "fikradda xeebta" ee naqshadeynta kala duwan ee gaariga tareenka ayaa siiyey calaamado buuxa. Tareenada cusub, kuwaas oo leh nidaamka albaabka ee si toos ah loo isticmaalo markii ugu horeysay ee adduunka ah, waxay bixiyaan safar degen oo siman sababtoo ah waxyaabaha caaga ah ee u dhaxeeya giraanta. Mashruuca İzmir wuxuu noqon doonaa milkiilaha weyn ee baabuurta 182 dhamaadka Maarso iyada oo la soo saarayo noocyo cusub oo ka socda dalka Shiinaha. Izmir ...
Guddoomiyaha CHP Kılıçdaroglu oo ka qaybgalay ka qaybgalka Ciidanku wuxuu galay Telefishinka 10 / 06 / 2012 Hogaamiyaha CHP Kemal Kılıçdaroğlu, caddaalad, annaga oo ogaaney in dhibaato badan, "Haddii aad fahamsanahay in kalsoonida ruxmado coke cusbo caddaalad bulsho," ayuu yiri. degmada First Fatsa Ünye iyo Guddoomiyaha Degmada CHP ee Kılıçdaroğlu ayaa khudbad hogaamiyaha CHP, ka dibna wuxuu u yimid inuu Seyit Duqa ciidamada Torun booqday. Madaxweynaha Torun lagu guda jiro booqashada, maaliyada Madaxweynaha Kılıçdaroğlu Army Orduspor'un iyo miiska hadiyad la aragtida ah etti.kılıçdaroğl, ka dibna wareeg ah, ee soo socda si Monument Ataturk ah, haddadan geeyo baabuur cable la mitir 2 350 28 oo dherer ah iyo golaha wasiirada. Isagoo hadlaya ka hor furitaanka hoggaamiyaha CHP Kemal Kılıçdaroglu, Ciidankan waa mid aad u qurux badan P
Kars Muddy T-Bar Teleski oo la bilaabay 21 / 03 / 2009 Kars dhoobo T-bar wiish ski Bandhigtay: Crystal barafka iyo geed adeegaya kaynta xarunta wiish ski T-bar dhoobo, Sarikamish waxa uu noqday meel ski kale oo loogu talagalay galaya orda geli xilli 2009 jiilaalka. Caddaymaha: Length - 923 duwanaanshaha 234 Sare u qaadid mm Speed ​​- 0-3 m / s Capacity - 800 Number p / h ee la Suro - 71 Engine Power - kw dhexroor Xarig 80 - 18 mm
Gawaarida Telefoon ee ugu Horreeya ee Gobolka ee Ku Gala Adeegga Gaadiidka 31 / 05 / 2011 Gaadiidka Gaziantep, oo lagu tilmaamay Paris oo ka mid ah Gobolka Bariga iyo Bariga Aasiya, gaariga telefishanka iyo buurta, oo loo xilsaaray jardiinada degmada Shahinbey, ayaa soo jiidatay fiiro gaar ah oo ay siiyeen xubnaha qareenka iyo muwaadiniinta. Degmada Sahinbey Karatas, Yeditepe, Southkent iyo Sahintepe oo udhaxeysa furitaanka Sahinbey Park ee xaafadda 280 ayaa ahaa muuqaal sawirro midab leh. Turkey ayaa ugu sareeya ee kooxda cayaarta carruurta, oo ka kooban shaqo 20 MiniaTurk, Amphitheatre, 950 socday ee meter la dhigto meesha qoob biyaha iyo riwaayadaha, iyo soo laabashada lugeyn karo baabuur cable buurta iyo alaabtii la dhigay adeegga. Guddoomiyaha Gobolka Gaziantep Süleyman Kamçı, AK Party General Gaziantep
Dhamaystirka waddada Alsancak, Izmir
Baabuur casri ah oo ku biiraya labo beerood oo balli ah